Yakanakisa Urolithin B upfu （1139-83-9） Mugadziri & fekitori
Urolithin B upfu
Cofttek ndiyo yakanakisa Urolithin B poda inogadzira muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi sisitimu (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 200kg.
Kemikari Zita: 3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, d] pyran-6-one
Chemical Fomula: C13H8O3
Molecular Weight: 212.2 g / mol
InChi Kiyi: WXUQMTRHPNOXBV-UHFFFAOYSA-N
NHASI Code: O=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
basa: Urolithin B inogona kuvandudza mitochondrial uye tsandanyama basa.
Urolithin B inogona kuvandudza muswe simba uye kutsungirira panguva yekukwegura.
Application: Urolithin B ndeye intestinal microbial metabolite ye ellagitannis uye inoratidza inokwanisa-anti-oxidant uye pro-oxidant activies zvinoenderana neye assay system nemamiriro ezvinhu. Urolithin B inogonawo kuratidza estrogenic uye / kana anti-estrogenic basa.
Solubility: Rinyoro nyoro muN, N-dimethylformamide uye dimethylmethylene. Sulfone, zvishoma yakanyungudika mune methanol, ethanol, uye ethyl acetate
Storage Temp: Hygroscopic, -20 ° C Freezer, Pasi mumhepo yakaoma
Mamiriro Ekutumira: Inotengeswa pasi pekushisa kwakadzika semakemikari asina ngozi. Ichi chigadzirwa chakasimba zvakakwana kwemavhiki mashomanana panguva yekutakura uye nguva inoshandiswa muDare.
Urolithin mamoremetite echipiri eellagic acid yakatorwa kubva kune ellagitannins. Muvanhu ellagitannins anoshandurwa neguvhu microflora kuita ellagic acid iyo inoshandurwa kuita urolithins A, urolithin B, urolithin C uye urolithin D mumatumbu makuru.
Urolithin A (UA) ndiyo inonyanya kuwanda metabolite yeellagitannins. Nekudaro, urolithin A haizivikanwe kuti inoitika zvakasikwa mune chero chikafu chinowanikwa.
Urolithin B (UB) izere nemetabolite inogadzirwa mudumbu kuburikidza nekushandurwa kwemaelgitannins. Urolithin B ndicho chigadzirwa chekupedzisira mushure mezvimwe zvigadzirwa zveurolithin zvakagadziriswa. Urolithin B inowanikwa mumurini seurolithin B glucuronide.
Urolithin A 8-Methyl Ether ndicho chigadzirwa chepakati panguva yeUrolithin A. Iyo yakakosha yechipiri metabolite yeellagitannin uye ine antioxidant uye inorwisa-kupisa zvivakwa.
Maitiro ekuita kweurolithin A uye B
● Urolithin A inokonzera mitophagy
Mitophagy ndiyo imwe yemhando yehutophagy iyo inobatsira kubvisa yakakanganisika mitochondrial yekushanda kwavo kwakakwana. Autophagy inoreva iyo yakajairika nzira iyo cytoplasmic zvirimo inosvibiswa uye nekudaro inogadziriswazve apo mitophagy ndiko kushatisa uye kudzokorodza mitochondria.
Munguva yekukwegura kuderera kwe autophagy chimwe chinhu chinotungamira mukudzikira kwemitochondrial basa. Kupfuurirazve, oxidative kusagadzikana kunogona zvakare kutungamira kune yakaderera autophagy. Urolithin A ane kugona kubvisa mitochondria yakaora kuburikidza nesarudzo autophagy.
● Antioxidant zvivakwa
Kushungurudzika kweOxidative kunoitika kana paine kusakwana pakati pemahara radicals uye antioxidant mumuviri. Aya akawandisa emahara radicals anowanzobatanidzwa nezvirwere zvakawanda zvisingaperi zvakadai semwoyo mitezo, chirwere cheshuga uye kenza.
Urolithins A uye B anoratidza antioxidant mhedzisiro kuburikidza nekukwanisa kwavo kuderedza mahara radicals uye zvakanyanya intracellular reactive oksijeni marudzi (ROS) mazinga uye zvakare inhibit lipid peroxidation mune mamwe maseru marudzi.
Kupfuurirazve, urolithin inokwanisa kudzivisa mamwe maokemikari e-oxidizing, kusanganisira monoamine oxidase A uye tyrosinase.
● Anti-anogumbura ehupfumi
Kuzvimba chiitiko chemuzvarirwo umo miviri yedu inorwisa chero chinhu chakadonha senge hutachiona, kukuvara, uye utachiona. Nekudaro, kuzvimba kusingaperi kunogona kukuvadza muviri sezvo izvi zvichisanganiswa nezvakakanganisika zvakasiyana senge asthma, nyaya dzemwoyo, uye gomarara. Kupora kusingaperi kunogona kuitika nekuda kwekusagadziriswa kurapwa kwakanyanya, kutapukira kana kunyangwe mahara radicals mumuviri.
Urolithins A uye B inoratidza anodzivirira kuzvimba zvinhu nekudzivirira nitric oxide kugadzirwa. Ivo kunyanya inhibit inducible nitric oxide synthase (iNOS) mapuroteni uye mRNA kutaura iyo ine mhosva yekuzvimba.
● Mishonga inorwisa utachiona
Utachiona hunosanganisira mabhakitiriya, fungi uye mavhairasi zvinoitika zvakasikwa munzvimbo uye kunyange mumuviri wemunhu. Nekudaro, hutachiona hushoma hunonzi hutachiona hunogona kukonzeresa chirwere chinotapukira senge furu, zviyero nemarariya.
Urolithin A uye B vanokwanisa kuratidza antimicrobial chiitiko nekuvhiringidza quorum sensing. Quorum sensing inzira yekukurukurirana kwebhakitiriya iyo inoita kuti mabhakitiriya awone uye kudzora maitiro ane hukama nehutachiona senge virulence uye motility.
● Inodzivirira protein glycation
Glycation inoreva chisungo chisina-enzymatic cheshuga kune lipid kana protein. Iyo yakakosha biomarker mune chirwere cheshuga uye kumwe kusagadzikana pamwe nekukwegura.
Yakanyanya protein protein glycation ndeye yechipiri mhedzisiro ye hyperglycemia ine basa rakakura mumatambudziko emoyo-akadai seshuga uye chirwere cheAlzheimer.
Urolithin A uye B vane anti-glycative zvivako zviri dhigirii iyo yakazvimiririra yavo yekuita antioxidant basa.
Urolithin B inobatsira
Urolithin B anowedzera zvakare ane akati wandei mabhenefiti ehutano uye mazhinji acho akafanana neuriolithin A mabhenefiti.
(1) Anti-kenza kugona
Izvo zvinopesana nekuzvidzivirira kwezveurolithin B zvinoita kuti zvive zvakanaka mumiriri wekurwisa cancer. Vamwe vaongorori vakataura izvi zvinokwanisika mu fibroblasts, microphages uye endothelial masero.
Zvidzidzo zvakataura kuti UB inodzivirira mhando dzakasiyana dzegomarara senge prostate, colon uye chirwere chegomarara.
Mune chidzidzo chine chekuita necancer cancer cell, ellagitannins, ellagic acid uye urolithins A neB zvakaongororwa kune avo anokwanisa kupikisa cancer. Vakataura kuti marapirwo ese avakakwanisa kudzivirira kukura kwea cancer cancer. Vakavhiringidza maseru emukenza kuwedzera mukati mekutenderera kwemaseru pamatanho akasiyana uye nekukurudzira apoptosis.
(2) Inogona kubatsira kurwisa oxidative kusagadzikana
Urolithin B ine yakanakisa antioxidant zvivakwa kuburikidza nekudzora inoshanda yeoksijeni marudzi ezinga uye lipid peroxidation mune mamwe maseru marudzi. Iwo akakwira mamazinga eROS anosanganisirwa nematambudziko mazhinji senge chirwere cheAlzheimer.
Mune ongororo ine neuronal masero akaoneswa kune oxidative kusagadzikana, urolithin B inowedzera pamwe neyeurolithin A akawanikwa achidzivirira masero kubva ku-oxidation nokudaro akawedzera kupona kwesero.
(3) Urolithin B muchiyeuchidzo chekuwedzera
Urolithin b inonzi yakagadziriswa yekuvandudza kweropa-bhavha yekubvumira. Izvi zvinowedzera kushanda kwechiitiko.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti urolithin B inogona kuva yekukanganisa ndangariro nekuvandudza kuwoneka kwese kwesekuziva kushanda.
(4) Inodzivirira kurasikirwa kwemhasuru
Kurasikirwa kwemhasuru kunogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana sekukanganisa, kuchembera uye kushomeka kwemapuroteni mukudya. Matanho akati wandei okumisa, kudzikisira kana zvirinani kudzivirira kupererwa kwemhasuru kusanganisira, kurovedza muviri, zvinodhaka uye amino asidhi pamwe chete nepypyphenols zvinogona kushandiswa.
Urolithins inogona kuverengerwa sepolyphenols uye kutamba basa mukudzivirira kurasikirwa kwemhasuru nekutanga tsandanyama protein synthesis uye zvakare kudzora kudzikira.
Muchidzidzo nemakonzo, Urolithin B ma supplements akatumirwa kwenguva yakati rebei akawanikwa achivandudza muswe wawo mukukura sezvo mhasuru dzakaonekwa dzichikura.
(5) Urolithin B anorwisa kuzvimba
Urolithin B ane anti-kuzvimba zvivakwa nekudzora zvakanyanya kuzvimba mamaka.
Muchidzidzo chemakonzo ane imposed renal fibrosis, urolithin B akawanikwa achigadzirisa kukuvara kweitsvo. Yakawedzera basa retsvo, morphology yeitsvo pamwe nekuderedza revo yekukuvara kwetsvo. Izvi zvinoratidza kuti UB yakakwanisa kudzora kuzvimba kwetsvo.
(6) Synergistic mabhenefiti eurolithin A uye B
Synergistic mhedzisiro zvakare yakataurwa mukubatanidzwa kweurolithin A uye B mukuziva kwekuita uye kugona. Chidzidzo ichi chakataura kuti kusangana uku kunogona kushandiswa mukurapa kana kudzivirira kusagadzikana kwakanangana nehumwe nedementia senge kushushikana kana chirwere cheAlzheimer.
Zvimwe zvinobatsira zvinosangana ne urolithins ndezve;
Inogadzirisa metabolic syndrome
Urolithin A uye B chikafu zvinyorwa
Urolithins haizivikanwe kuti inowanikwa nemusikirwo mune chero zvekudya zvinyorwa. Ivo zvigadzirwa zvekushandurwa kwe ellagic acids iyo inotorwa kubva kune ellagitannins. Ellagitannins inoshandurwa kuva ellagic acids neiyo gut microbiota uye ellagic acid inoshandurwa zvakare mune yayo metabolites (urolithins) mumatumbo makuru.
Ellagitannins inoitika zvakasarudzika mune zvekudya senge mapomegranati, mabriji anosanganisira sitirobheni, raspberries, cloudberries uye mabheribheri, muscadine mazambiringa, maarumondi, magwavha, tii, uye nzungu senge walnuts uye chestnuts pamwe nezvinwiwa zvemakore eouki semuenzaniso waini tsvuku uye whiskey kubva migomo yemiouki.
Isu tinogona saka kupedzisa urolithin A chikafu uye urolithin B chikafu chikafu cheellagitannin. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ellagitannin bioavailability yakanyanya kuderera nepo yayo yechipiri metabolism (urolithins) iri nyore kuwanikwa.
Urolithins kuburitsa uye kugadzirwa zvinosiyana zvakanyanya pakati pevanhu kubvira kutendeuka kubva kumaelgitannins kunovimba ne microbiota mumatumbu. Kune chaiwo mabhakitiriya anobatanidzwa mukushandurwa uku uye anosiyana pakati pevanhu apo vamwe vane yakakwira, yakaderera kana isina kuwanikwa yakakodzera microbiota. Izvo zvekudya zvinyorwa zvinosiyanawo mumatanho avo eellagitannins. Nekudaro izvo zvingabatsire zveellagitannins zvinosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe.
Urolithin A uye B Zvinowedzera
Urolithin A zvinowedzerazve pamwe neUrolithin B zvinowedzerwa zviri nyore mumusika seellagitannin-yakafuma chikafu sosi inowedzera. Urolithin A zvinowedzera zvinowanikwa zviri nyore. Kazhinji mapomegraneti anowedzera ave akatengeswa zvakanyanya uye achishandiswa nekubudirira. Izvi zvinowedzera zvinogadzirwa kubva kumichero kana nzungu uye zvakagadzirwa kuita fomu remvura kana yeupfu.
Nekuda kwekusiyana kwema ellagitannins kuiswa mune zvakasiyana zvekudya, vatengi ve urolithin vanoitenga vachifunga nezvekudya. Izvi zvinoshandawo pakutsvaga urolithin B poda kana zvinowedzera mvura.
Iwo mashoma emakiriniki emakiriniki akaitiswa neurolithin A poda kana B havana kumhan'ara chero zvakakomba zvakakomba mhedzisiro kubva mukutungamira kweizvi zvinowedzera.
Garcia-Munoz, Cristina; Vaillant, Fabrice (2014-12-02). "Metabolic Fate yeEllagitannins: Zvinoreva Hutano, uye Maonero Ekutsvagisa eInovandudza Inoshanda Zvikafu". Ongororo Dzakakosha muKudya Sayenzi uye Kudya.
Bialonska D, Kasimsetty SG, Khan SI, Ferreira D (11 Mbudzi 2009). "Urolithins, intestinal microbial metabolites yePomegranate ellagitannins, inoratidza yakasimba antioxidant chiitiko mune sero-based assay". J Agric Chikafu Chem.
Bodwell, Graham; Pottie, Ian; Nandaluru, Penchal (2011). "Inverse Erekitironi-Inoda Dhiziri-Alder-Yakavakirwa Yese Synthesis yeUrolithin M7".
Urolithin A upfu